Maxkamada sare ee Norwey oo ogolaatay in gabar soomaali ah wadanka laga ceyriyo. - NorSom News
Maxkamada sare ee Norwey oo ogolaatay in gabar soomaali ah wadanka laga ceyriyo.
Maxkamada sare ee Norwey ayaa maalintii shalay ahayd soo gaba-gabaysey dhagaysiga dacwada racfaanka laga soo gudbiyay UDI-da ee ku saabsan in gabar soomaali ah oo wadanka soo gashay 2009, dib loogu celiyo wadanka Hungry oo ay faro ku leedahay. Gabadhan oo sida ay sheegeen dhakhaatiirta baartay in ay maskixiyan og jir ahaanba u xanuunsantahay, ayna la ildarantahay dhibaatadii kasoo gaartay sanado badan oo ay ku jirtay xaalal nolol adag. In dib loogu celiyo wadanka Hungry ay keeni karto in xaaladeeda caafimaad ay kasii darto, maadaama aysan caawin fiican ka heli doonin wadanka Hungry oo markii hore faro kasoo qaaday.
Halkan akhri warbaxinta aan ka qorney yaasmiin, bilowga maxkamada.
Maxkamada sare oo baareysey in dib u celinta yaasmiin jabinayso qodobta sadexaad ee xeerka ururka xuquuqul-insaanka yurub, ayaa sheegay inaysan celinta yaasmiin aysan jabineyn qodobkaas. Isla markaana ay dowlada Norwey oo markii go aanka celinta Yaasmiin gaartay aysan wax khalad ah gelin. Dowlada Norwey ayaa horey u sheegtay in celinta Yaasmiin ay tahay mid ay ku saleysay, xeerka ay dhigteen wadamada ku bohoobay Dublinka. Kaas oo dhigaya in qofka uu ku noolaado wadanka uu uu markii hore iska dhiibay oo faraha ku leeyahay.
Halkan ka akhriso go aanka maxkamada oo rasmi ah( officiel)
Halkana ka akhriso nrk oo wax ka qorey shalay
Previous articleProf. Jawaari oo ka baaqdey booqashadiisii Norwey.
Next articleCiise midnimo oo shalay guul muhiim ah ku hogaamiyay kooxda KFUM